Nhau - Kuendesa neChina kunze kwenyika mumwedzi miviri yekutanga yegore rino kwakapfuura zvinotarisirwa nemusika
Chiwanikwa saha reza
Dynamic basa swing saha
Kudzosera saw blade
Kuunza nekutengesa kweChina mumwedzi miviri yekutanga yegore rino kwakapfuura zvinotarisirwa nemusika
Kuita kweChina kupinza nekutengesa kunze kwenyika mumwedzi miviri yekutanga yegore rino kwaive kwakapfuura zvaitarisirwa mumusika, kunyanya kubvira 1995, sekureva kwedhata rakaburitswa neGeneral Administration of Customs munaKurume 7. Pamusoro pezvo, kutengeserana kweChina nevatengesi vakuru vekudyidzana kwakawedzera zvakanyanya, zvichiratidza kuti kusangana kweChina nehupfumi hwepasi rose kwadzikira kumberi. Reuters yakashuma kuti China yakabudirira kudzora denda, uye mirairo yezvinhu zvinorwisa denda kunze kwenyika zvakaramba zvichienderera. Kuitwa kwedzimba dzekuzviparadzanisa mudzimba munyika zhinji kwakatungamira mukupararira kwekudiwa kwemidziyo yemumba neyemagetsi, izvo zvakatungamira mukuvhurwa kweChina chekutengeserana kunze kwenyika muna2021. Zvisinei, General Administration yetsika yakaratidzawo kuti mamiriro ehupfumi hwenyika ari yakaoma uye yakaoma, uye China yekutengeserana nedzimwe nyika ine nzira refu yekufamba.
Iyo inokurumidza kukura chiyero chekunze kubva 1995
Sekureva kwedata reGeneral Administration yetsika, huwandu hwese hwezvinhu zveChina zvekutengesa nekutengesa zvinhu kunze kwenyika mumwedzi miviri yekutanga yegore rino ndeye 5.44 trillion yuan, kuwedzera kwe32.2% panguva imwecheteyo gore rapfuura. Pakati pavo, kutumira kunze kwaive 3.06 trillion yuan, kumusoro 50.1%; kupinza yaive 2.38 trillion yuan, kumusoro 14.5%. Iko kukosha kwakabatana mumadhora ekuUS, uye huwandu hwese hwekunze nekutengesa kunze kweChina hwakawedzera ne41.2% mumwedzi miviri yapfuura. Pakati pavo, kutengesa kunze kwakawedzera ne60.6%, kuunza kunze kwakawedzera ne22.2%, uye kunze kwakakwira ne154% munaFebruary. AFP yakasimbisa mumushumo wayo kuti ndiyo yaive inokurumidza kukura chiyero muChina chiitiko chekutengesa kunze kubva 1995.
ASEAN, EU, United States neJapan ndivo maneja makuru ekutengeserana muChina kubva munaNdira kusvika Kukadzi, nemitengo yekukura kwekutengeserana ye32.9%, 39.8%, 69.6% uye 27.4% muRMB zvichiteerana. Sekureva kweGeneral Administration yetsika, zvinotumirwa neChina kuUnited States zvaisvika zviuru mazana mashanu nemakumi mashanu ane makumi matatu nepfumbamwe, zvikwiriso zvinokwana zvikamu 75.1 muzana mumwedzi miviri yapfuura, nepo bhizimusi rekusara neUnited States raive makumi matatu nemazana mana emakumi mana emamiriyoni yuan, kuwedzera kwe88.2 muzana. Munguva imwecheteyo gore rapfuura, kupinza nekutengesa kunze kwenyika pakati peChina neUnited States kwakadonha ne19,6 muzana.
Kazhinji, kuendesa kunze kweChina uye kutengesa kunze mumwedzi miviri yekutanga yegore rino hakusi kure kupfuura nguva imwechete yegore rapfuura, asi zvakare kwakawedzera neinenge makumi maviri muzana zvichienzaniswa nenguva imwecheteyo muna 2018 na2019 kusati kwatanga. Huojianguo, mutevedzeri wemutungamiri weWorld Trade Organisation Research Association yeChina, akaudza nguva dzepasirese musi waKurume 7 kuti kupinza nekutengesa kunze kweChina kwakadzikira mumwedzi miviri yekutanga yegore rapfuura nekuda kwekukanganiswa kwedenda iri. Kubva pane hwaro hwakaderera, iyo yekumhanyisa uye yekuburitsa dhata yegore rino inofanirwa kunge iine kuita kwakanaka, asi iyo data yakaburitswa neGeneral Administration yetsika ichiri kure zvakanyanya kupfuura zvaitarisirwa.
Zvinotengeswa neChina zvakawedzera mumwedzi miviri yekutanga yegore rino, zvichiratidza kudiwa kwakasimba kwepasirese kwezvinhu zvakagadzirwa, uye zvakabatsirwa nekuderera kwechikonzero nekuda kwekusamira zvakanaka kwehupfumi munguva imwecheteyo gore rapfuura, kuongororwa kweBloomberg kwakadaro. General Administration yeCustoms inotenda kuti China yekunze kutengesa nekutengesa kunze kwenyika mumwedzi miviri yekutanga iri pachena, "haina kusimba munguva yekunze", inoenderera nekukurumidza kudzoka kubva muna Chikumi gore rapfuura. Pakati pavo, kuwedzera kwekunze kwekuda kunokonzerwa nekudzoserwa kwekugadzirwa uye kudyiwa muEuropean neAmerica hupfumi zvakatungamira mukukura kwekutengeswa kweChina.
Kuwedzera kwakakosha mukutenga kwezvinhu zvakakosha zvigadzirwa
Hupfumi hwemumba hwave kuramba huchiwedzera, uye PMI yekugadzira indasitiri iri pamutsetse wekubudirira uye kuoma kwemwedzi gumi nemaviri. Iyo bhizinesi ine tarisiro yakawanda pamusoro peizvo zvinotarisirwa mune ramangwana, izvo zvinokurudzira kuunzwa kwenzvimbo dzakabatana, magetsi zviwanikwa zvigadzirwa senge yakasanganiswa wedunhu, simbi ore uye isina kucherwa mafuta. Zvisinei, kuchinja kukuru kwemitengo yepasi rose yezvinhu pakati pezvikamu zvakasiyana zvinokonzeresa shanduko yakakura mumutengo wevhoriyamu wezvinhu izvi apo China inozvitengesa.
Sekureva kwedata reGeneral Administration yetsika, mumwedzi miviri yekutanga yegore rino, China yakatumira matani mamirioni makumi masere nematanhatu esimbi, kuwedzera kwe2.8%, mutengo wepakati wekutenga 942.1 yuan, wakakwira 46.7%; oiri isina kubikwa yakatorwa kunze kwenyika yakasvika matani emamirioni 89.568, kuwedzera kwe4.1%, uye mutengo wepakati wekutora yaive 2470.5 yuan patani, pasi 27.5%, zvichikonzera kuderera kwe24.6% muhuwandu hwekupinza.
Global chip supply tension yakabatawo China. Sekureva kweGeneral Administration yetsika, China yakatumira masekondi mabhiriyoni 96,4 mumwedzi miviri yekutanga yegore rino, iine huwandu hwese hwemabhiriyoni 376.16 yuan, nekuwedzera kwakakura kwe36% uye 25.9% muhuwandu uye huwandu zvichienzaniswa neiyoyo nguva gore rapfuura.
Panyaya yekutengesa kunze kwenyika, nekuda kwekuti denda repasirese harisati raputika panguva imwechete gore rapfuura, kuburitswa kwemidziyo yekurapa nemidziyo kuChina mumwedzi miviri yekutanga yegore rino yaive 18.29 bhiriyoni yuan, kuwedzera kukuru kwe 63.8% ichienzaniswa nenguva yakafanana gore rapfuura. Pamusoro pezvo, nekuti China yakatungamira mukutungamira kweECVID-19, kudzora uye kugadzirwa kwefoni mbozha kwaive kwakanaka, uye kunze kwenyika kwefoni mbozha, midziyo yemumba nemotokari zvainge zvakwira zvakanyanya. Pakati pavo, kuburitswa kwenharembozha kwakawedzera ne50%, uye kuendesa kunze kwemidziyo yemumba nemotokari zvakasvika ku80% uye 90% zvichiteerana.
Huojianguo akaongorora kune epasirese nguva kuti hupfumi hweChina hwakaramba huchivandudza, musika kuvimba kwakadzoreredzwa uye kugadzirwa kwebhizinesi kwaive kwakanaka, saka kuwanikwa kwezvinhu zvakakosha mbishi zvakawedzera zvakanyanya. Pamusoro pezvo, nekuti denda iri kunze kwenyika richiri kupararira uye simba risingakwanise kudzoreredzwa, China iri kuenderera mberi nekutamba chinzvimbo chekugadzira pasi rese, ichipa rutsigiro rwakasimba rwekupora kwedenda repasi rose.
Mamiriro ekunze achiri akaipa
General Administration yeCustoms yeChina inotenda kuti China yekutengeserana nedzimwe nyika yakavhura mikova yayo mumwedzi miviri yapfuura, iyo yakavhura kutanga kwakanaka kwegore rese. Ongororo iyi inoratidza kuti odha dzekunze dzekunze dzemabhizinesi ekuChina dzakawedzera mumakore achangopfuura, zvichiratidza tarisiro yetariro pamamiriro ekunze kunze kwenyika mumwedzi mitatu inotevera. Bloomberg anotenda kuti kuwedzera kweChina kunze kwenyika kwakabatsira kutsigira kupora kweChina kubva mudenda rakaumbwa V uye kuita China nyika chete inokura mune hupfumi hukuru hwepasi muna 2020.
Musi waKurume 5, gwaro rebasa rehurumende rakataura kuti chinangwa cheChina chekukura kwehupfumi chegore ra2021 chakatemwa zvinopfuura zvikamu zvitanhatu kubva muzana. Huojianguo akataura kuti kunze kwenyika kweChina kwakawedzera zvakanyanya mumwedzi miviri yapfuura nekuda kwekuti kunze kwenyika kwakabatanidzwa muGDP, ichiisa hwaro hwakasimba hwekuzadzisa chinangwa chegore rose.
Novel coronavirus pneumonia iri kupararirawo pasirese, uye kusagadzikana uye kusagadzikana zvinhu mune yepasi rese mamiriro kuri kuwedzera. Mamiriro ezvinhu ehupfumi epasi rose akaoma uye akaomarara. China yekutengeserana nedzimwe nyika ichiri kukura zvakatsiga. Huweijun, mutungamiri wezvehupfumi weChina kuMacquarie, inzvimbo yezvemari, anofungidzira kuti kuwedzera kweChina kunze kwenyika kuchaderera mumwedzi mishoma inotevera yegore rino nyika dzakasimukira padzinotangazve kugadzirwa kwemaindasitiri.
"Zvinhu zvinokanganisa kutengeswa kweChina kunze kwenyika zvinogona kunge kuri kuti mushure mekunge chirwere ichi chanyatsodzorwa, hunyanzvi hwepasi rose hunodzoreredzwa uye kutengeswa kweChina kunogona kudzikira." Huojianguo ongororo yakati senyika huru kwazvo yekugadzira kwemakore gumi nerimwe akateedzana, cheni yakazara yeindasitiri yeChina pamwe nekukwikwidza kwekugadzira zvigadzirwa hazviite kuti kunze kweChina kuchinje zvakanyanya muna 2021.
Post nguva: Mar-23-2021
SHIGUDUN VILLAGE, QINGJIANG GUTA, YUEQING CITY